Global Voices teny Malagasy » Mitsapa ny fampiasan’ny miaramila rosiana ny media sosialy ny fialan’i Etazonia ao Syria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2019 4:58 GMT 1	 · Mpanoratra Milan Czerny Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Akon'ny RuNet
“Fantatry ry zareo tsara hoe iza no ho tonga haka ny toerana.” Pavel Remnev, masoivohon'ny ZvezvdaTV (manana fifandraisana amin'ny minisiteran'ny fiarovana rosiana) mitety ireo toby miaramila Etazonia nilaozana eo ivelan'i Manbij, Syria, tamin'ny 18 Oktobra 2019. Sary avy amin'ny lahatsary YouTube ZvezdaTV “Уникальные кадры с брошенной базы США в Манбидже “.
Tamin'ny 15 Oktobra ny Rosiana mpanora-gazetin'ny ady Oleg Blokhin namoaka lahatsary maromaro  tao amin'ny media sosialy ahitana azy mitsidika ny toby miaramila an'i Etazonia teo aloha tao Manbij, tao avaratr'i Syria, taorian'ny nandehanan'ny miaramilla amerikana. Nanomboka niely tamin'ny media sosialy rosiana sy tamin'ireo fantsona Telegram ny saripika noraisin'ny miaramila rosiana tamin'ny toerana mitovy amin'itony ihany. Nampita haingana ireo lahatsoratry ny miaramila ao anatin'ny horakora-pifaliana, ary tsy miala mihitsy any amin'ireo GI (tafika amerikana) nandao kimaimaika an'i Syria ny maso, ny fantsona fahitalavitra Rosiana ireo pejy VKontakte, tambajotra rosiana malaza, miresaka miaramila.
Mifanohitra tanteraka amin'ny ezaka ataon'ny tafika rosiana manao izay hamerana ny fampiasan'ny miaramilany zavatra atao an-tserasera ireo karazan-tsehatra hitanao ireo. Vao haingana tamin'ity taona ity, nanasonia lalàna vaovao mandrara ny miaramila rosiana tsy hampiasa smartfinday ary tsy hamoaka sary rehefa eo am-panaovana ny asany ny Filoha Vladimir Potinina. Efa noraràna amin'izao fotoana izao ny miaramila mba tsy hanana fitaovana maka sary sy afa-miditra aterineto. Tamin'ny fotoana nandraisana ny lalàna, nitatitra ny seha-baovao mahaleotena Meduza fa “maro”  ny miaramila no nigadra sy voasazy noho ny fanitsakitsahana ny fitsipika vaovao. Nisy aza moa ny sasany no voampanga nefa talohan'ny nandaniana ny lalàna no nanao ilay fihetsika: nigadra 15 andro noho ny fandefasana ny sariny sy ny sipany volana maro mialoha ny mampanakery ny lalàna i Yegor Kruglov.
Nanoritra ireo nanao ny volavolan-dalàna fa nolaniana izany satria “mahaliana manokana ireo servisim-piarovana any amin'ny firenena hafa, mahaliana ireo mpampihorohoro sy fikambanana mahery fihetsika ireo miaramila eo am-panaovana ny asany ireo.” Na izany aza, maro no mihevitra fa ny tena antony nampidirana ny lalàna dia noho ireo fanesorana salobona ataon'ny mpanora-gazety mpandalina sy mpamakafaka ary mpanao fikarohana, tahaka ny Bellingcat  na ny Conflict Intelligence Team , izay miankina amin'ny data open-source, indrindra fa ireo avy amin'ny tambajotra media sosialy. Afa-nanaporofo ireo mpanao fikarohana sy fanadihadiana ireo ny fitsabahan'ny tafika rosiana tany Syria noho ny paositra navoakan'ireo miaramila tao amin'ny media sosialy sy ny famangitana GPS mialoha ny nankatoavan'i Kremlin tamin'ny fomba ofisialy ny fidirany an-tsehatra tao amin'io firenena io. Mitovy amin'izany ihany koa ry Simon Ostrovky ao amin'ny VICE news sy ireo mpikaroka ao amin'ny Forensic Architecture afa-nanangona porofo amin'ny fidiran'ny miaramila rosiana tany amin'ny ady tao Okraina atsinanana , izay tsipahin'i Moskoa tanteraka. Nampian'ny selfies sy ireo lahatsary YouTube navoakan'ireo miaramila eo ampanaovana ny asany ihany koa ry Ostrovsky sy ireo mpiara-miasa aminy.
“Selfie, sary, aterineto: manantenà hello avy amin'ny fahavalo!” vakio ity afisy ity. Niaviana: VKontakte/DKulbin  (nikatona ho an'ny daholobe ny pejin'ny mpisera avy eo.)
Na dia teo aza ny fitsipahana, nahasosotra ireo mpitarika ara-miaramila ao Rosia miharihary ireo fanokafana fisalobonana ireo. Ny marina, Nivoaka antserasera mbamin'ny afisy ara-panabeazana mampahatsiahy ny Ady Mangatsiaka mihitsy aza. Ireo afisy, izay heverina ho mihantona ao amin'ireo efitra fatoriana sy fanalana andron'ny miaramila  ireo, ary nokasaina hampianatra ireo eo am-panompoana ny fihetsika atao an-tserasera. Afisy iray mandrisika ny miaramila tsy hizara torohay amin'ny tranonkalan-tambajotra sosialy. Afisy faharoa mampitandrina ny miaramila tsy hampiasa fitaovana misy famangitana ara-jerografika, izay mety ho hitan'ny andian-tafika OTAN.
Azo atao ohatra indrindra ny amin'izany ny fanambaràn'ny mpamakafaka teo aloha tao amin'ny Foibem-Pikarohana Siantifika an-kajimirindra ao amin'ny Departemantan'ny Raharahan'ny Filoha Rosiana (GRCC), sampan-draharaha iray mamokatra fitaovana hanaovana fikarohana antserasera voarefy tsara: “Nilaza isika hoe tsy misy miaramila rosiana any Syria na any Donbas, fa tany ry zareo. Ka izany no mahatonga anay mifanala hazakazaka amin'ny Bellingcat hamangitra ara-joegrafika (geolocate) izay paositra rehetra ahitana miaramila rosiana adala manao selfies eny an-tatatry ny ady, maka sary miarala amin'ny basiny,” hoy ny mpiasa taloha iray tsy mitonona anarana tao amin'ny GRCC tamin'ny Meduza .
Hita ho nitranga tamin'ny sehatra isankarazany ity tatitra ity: voalohany, miaramila rosiana maka sary ao an-toby, sy ireo kaonty VKontakte mamoaka indray ny lahatsarin'ireo fiara rosiana miditra an'i Manbij, raisin'ireo ao an-toerana manofahofa sainam-pirenena Syriana  taorian'ny fialàn'ny Amerikana. Mifanindran-dalana amin'izany, mpanao gazety manjohy ireo Rosiana mpikarama an'ady, toa an'i Oleg Blokhin  na ny sampam-baovao Abkhazy Anna-News  — izay milaza ho “miady amin'ny milin'ny Tandrefana fanasana atidoha” — nanatontosa ny fitsidihany manokana ireo toby US tamin'ny fomba voasaina kokoa, mba ahafahana mampizotra ny torohay (vaovao) amin'ny fomba nitiavana azy. Farany, ireo fantsona fahitalavitra rosiana toy ny RT mifilma ny fitsidihany manokana  ireo toerana nilaozana.
Raha fohy ezaka, tsikaritra fa mampandroso ny tombontsoan'i Rosia ny fielezan'ireny tsanganana ireny haingana. Mahita ny lalany any amin'ny Twitter hojeren'ny tandrefana ny lahatsary VKontakte, mampisara-kevitra sy miteraka tsikera mamaivay  amin'ny fanapahan-kevitr'i Donald Trump hiala any Syria avaratra ary hanome alalana an'i Torkia sy i Rosia hahatratra ny zarataniny. Ankoatra izany, mety ho nanimba ny herintsain'ny andia-tafika tandrefana ireny tsanganana ireny, satria mandefa mivantana ny “fakàna” ny toby ho fomba mora ho an'ny governemanta rosiana ho famariparitana ny tenany ho hery goavana tokana sisa tavela ao amin'ny faritra izany.
Farany, nitampodifohy ny paikady haneso ny firenena tendrefana amin'ny alalan'ny fanaovana lahatsary amin'ireo torohay saropady. Tamin'ny Septamber 2018 ny fantsona fahitalavitra tohanan'i Kremlin RT nanatontosa antsafa  tamin'olona roa avy ao amin'ny Direktôràn'ny Fitsikilovana (GRU), sampam-pitsikilovana miaramila rosiana ampitan-dranomasina, izay voampanga ho nanapoizina an'i Sergey Skripal tao Salisbury, Angletera, tany am-piandohan'ity taona ity. Ho setrin'ny filazan'ny Britanika fa nanatontosa fikasana hamono olona nobaikoan'i Moskoa ry zareo ireo, dia namaly ireo lehilahy roa ireo fa mpikarakara sakafo fanatanjahantena miala sasatra any Britaina ry zareo. Voaporofo fa nanana ny lanjany lehibe tamin'ny fiezahan'ny Bellingcat hamantatra ny tena mari-panondroana an'ireo lehilahy roa ireo ilay lahatsary; vokatr'izany,hita amin'ny sary ireo lehilahy roa ireo nanatrika ny mariazin'ny zanakavavin'ny Mazaoro Jeneraly Andrey Averyanov, komandin'ny GRU.
Tianay ny misaotra amin'ny fonay lalina ao an'i @m_simonyan  sy i @RT_com  — tsy ho nahazo torohay betsaka momba an'i Chepiga/Boshirov izahay raha tsy nisy ny fanapahan-dry zareo hevitra handrakitra 20 minitra mihoara, antsafa kanto dia kanto nifanaovana taminy, hahafantaranay izay kely indrindra ao aminy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/23/144788/
 lahatsary maromaro: https://vk.com/wall36327961_7974
 Meduza fa “maro”: https://meduza.io/feature/2019/08/06/matros-razgovarival-v-kazarme-po-videosvyazi
 porofo amin'ny fidiran'ny miaramila rosiana tany amin'ny ady tao Okraina atsinanana: https://www.vice.com/en_us/article/ev9dbz/russia-denies-that-its-soldiers-are-in-ukraine-but-we-tracked-one-there-using-his-selfies
 afisy, izay heverina ho mihantona ao amin'ireo efitra fatoriana sy fanalana andron'ny miaramila: https://medium.com/dfrlab/putinatwar-russian-information-security-101-for-selfie-soldiers-c3cbfdff1245
 tamin'ny Meduza: https://meduza.io/en/feature/2019/09/20/the-information-nation
 ao an-toerana manofahofa sainam-pirenena Syriana: https://vk.com/video255744597_456253764
 toa an'i Oleg Blokhin: https://vk.com/wall36327961_7954
 ny sampam-baovao Abkhazy Anna-News: https://vk.com/wall-35276355_1610484
 RT mifilma ny fitsidihany manokana: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZS26s6xBLhc
 mampisara-kevitra sy miteraka tsikera mamaivay: https://twitter.com/haynesdeborah/status/1184106819901255681
 nanatontosa antsafa: https://www.rt.com/news/438350-petrov-boshirov-interview-simonyan/